Iinqwelomoya ezingakumbi eziya eBonaire zisuka eUSA eDelta, eMelika naseUnited ngoku
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Caribbean » Iinqwelomoya ezingakumbi eziya eBonaire zisuka eUSA eDelta, eMelika naseUnited ngoku
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba eziNqabileyo zaseNetherlands • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
IQumrhu lezoKhenketho iBonaire (TCB) libhengeza iishedyuli zenqwelomoya ezivela kwiAmerican Airlines, Delta Air Lines, nakwiUnited Airlines kwezi nyanga zizayo.
Zombini i-Delta Air Lines kunye neAmerican Airlines zibona imeko elungileyo kunye nokubhukisha imfuno yesi siqithi.
I-United Airlines iya kuphinda iqale iinqwelomoya ukuya eBonaire isuka eHouston naseNewark ngo-Novemba.
Isiqithi saseDutch Caribbean saseBonaire siyakwamkela ukubuya kweenqwelo moya zabakhweli ezivela e-US.
Ukulandela ukuphehlelelwa ngempumelelo kweenqwelomoya ukusuka e-US ngoJuni ukuya kwisiqithi saseDutch seCaribbean saseBonaire, iZiko lezoKhenketho eBonaire (TCB) libhengeza iishedyuli zenqwelomoya ezivela eAmerican Airlines, eDelta Air Lines, naseUnited Airlines kwezi nyanga zizayo.
Njengenxalenye yesiCwangciso sokuBuyisa uKhenketho, IQumrhu lezoKhenketho eBonaire izakuqhubeka ngale mizamo yokuqhubeka nokujonga ukukhuthazeka kwabakhenkethi kwesi siqithi, nakuqoqosho lwasekhaya.
bobabini Delta Air Lines, kwaye I-American Airlines ibona imeko elungileyo, kunye nokubhukisha imfuno yesiqithi. Ke, eli lithuba elihle lokunyusa inani leenqwelomoya eziya eBonaire.
Okwangoku ngoNovemba 20, 2021; I-Delta inenqwelomoya yenqwelo moya yangoMgqibelo evekini ecwangciselwe ukuya eBonaire isuka eAtlanta, eGeorgia, kwaye oku kuhamba ngenqwelomoya ngeveki kuyonyuka kube ziinqwelomoya ezimbini ngeveki ngoLwesithathu nangoMgqibelo phakathi kukaNovemba 24, 2021 -Disemba 15, 2021. I-18 iyakubakho inqwelomoya mihla le ngaphandle kooLwezibini. Ukususela ngoJanuwari 2021, 4 ukuya ku-Epreli 2022, 5 kukho uMvulo, uLwesithathu, uLwesihlanu nangoMgqibelo ocwangcisiweyo.
I-American Airlines ishedyuli yendiza yangoku ngoNovemba 6, 2021 ziindiza ezimbini zeveki ngolwesiThathu nangoMgqibelo ukusuka eMiami, eFlorida. Ukuqala ngo-Novemba, ngo-2021 ukuya nge-3 kaJanuwari ngo-2022 inqwelo moya yangoMvulo iya kongezwa kuhambo. Kuya kubakho iinqwelomoya eziya eBonaire ngexesha leholide, ukusuka nge-16 kaDisemba, ngo-2021 ukuya nge-3 kaJanuwari ka-2022.
Nge-6 kaNovemba, i-2021 i-United Airlines iqala ngenqwelomoya ukusuka eHouston, eTexas ngenqwelomoya ngeveki ukuya eBonaire ngoMgqibelo ngokubuya ngenqwelomoya ngeCawa, kunye nomoya wangoMgqibelo weveki ukusuka eNewark, eNew Jersey.